Farmaajo oo dhaqaale ku bixinaya xaflado lagu taageerayo | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo dhaqaale ku bixinaya xaflado lagu taageerayo
Wixii ka danbeeyey heshiiskii gollaha wadatashiga, waxaa kordhaya dhaqaalaha uu Farmaajo ku bixinayo, kulamada lagu taageerayo in dib loo doorto.
MUQDISHO, Soomaaliya- Kulamada lagu taageerayo dib u doorashada Farmaajo, ee uu dhaqaalaha badan ku bixinayo ayaa kordhaya, iyadoo kulankii ugu danbeeyey uu Muqdisho ka dhacay jimcihii shalay ahaa.
Xafladan ayaa laga sheegay, wax qabad been abuur ah, kuwaa oo la tilmaamay inuu ka lib keenay mudadii uu dalka maamulayey, waxaana ka soo qeyb galayaasha oo noocyo kala duwan isugu jiray, u badnaa dad dhaqaale doon ah, oo qaarkood loo qoray, hadallada ay madasha ka oranayaan.
Qaban qaabiyayaasha kulankii dhacay, waxaa ka mid ahaa, kooxda cayayaanka baraha bulshada, ee Farmaajo u aflaagaadeysa siyaasiyiinta iyo dadka sumacad ku leh, hanaanka dowladnimo iyo kan qaranimo ee dalka.
Waxaa sidoo kale buun buuninta kulamadaas, kaalin lixaad leh ka qaadanaya, warbaahinta maxaliga ah qaarkood, kuwaa oo laga xusi karo Idaacadda Shabelle, taa oo sumcadii warbaahinta ku baddelatay, dhaqaale uu Farmaajo dekadda Muqdisho ka siiyo, milkiilaha idaacaddaas, Cabdimaalik Yuusuf Maxamuud.
Dadka ka qeyb galaya, xafladaha uu dhaqaalaha ku bixinayo, oo u badan barakacayaasha, ayaa la siiyaa qarash kooban, waxaana laga khasaariyaa waqtiga ay nolosha maalin laha ku raadsan lahaayeen, maadaama aanay waxba ku tareynin 5-ta dollar, ee ay ku helaan ka qeyb galka kulamadaas.
Waxaa qaar ka mid ah dhallinyarada, daruufta dhaqaale ay ku riixday ka qeyb galka xafladahaas, lagu qasbaa in ay ka hadlaan madasha, iyadoo loo soo qoro khudbadaha ay jeedinayaan oo u badan, kuwa isugu jira caadifad qabiil, iyo magac dil ay u geysanayaan, dadka ka aragtida duwan Farmaajo.
Dhallinyarada qeybtood oo KON la hadlay, ayaa sheegaya, in ay culeys amni ka dhaxleen, hadalladii uu u soo dhiibay hoggaanka waqtigiisa dhamaaday, waxaana ragga Farmaajo u qaabilsan ololaha kulamadas ay reebteen numberada taleefanada dhallintaas, kuwaas oo lagu wargaliyey in aan la waayin waqtigii loo baahdo, si mar kale loogu adeegto.
Xafladahaan oo wax is baddel ah, aan ku sameyn karin fashilka lasoo gudboonaaday Farmaajo, ayuu doonayaa inuu mar kale ku marin habaabiyo dadka, waana nin iska indha tiraya tacadiyadii uu dalka ka geystay mudadii uu xukunkiisa jiray.